I nomuthi "Peritol" (international igama - ukulungiselela "Cyproheptadine") libhekisela eqenjini izidakamizwa antihistamine, okuhloswe ngalo ukuqeda le komzimba ka aetiologies ahlukahlukene. Njengoba ekusizeni ukuba abhekane ngokuphumelelayo nesitha eziningi nezinye izinkinga. Namuhla sifunda, iziphi ezinye izimo, udokotela angase atuse ukuba isiguli izidakamizwa, thola ukuthi ukuyisebenzisa, kanye inkulumo mayelana intengo kwemithi kanye umbono abantu ngaye.
I nomuthi "Peritol" kuvimbela nesenzakalo nobukhali komzimba buthakathaka. Ngaphezu kwalokho, it has antipruritic, antiexudative, ukupholisa. Umuthi kuvusa esesuthi futhi usiza abesifazane abaphethwe sokuzincisha ukudla, isisindo somzimba.
Kusho "peritol" yokusetshenziswa zicacile futhi esibanzi, kungenziwa kuphethwe Ochwepheshe kulezi izinkinga zezempilo:
- Umzimba ongezwani nezinto ukusabela imvelo ezahlukahlukene, kufaka phakathi urticaria, dermatitis, angioedema.
- Hay imfiva.
- Uma isiguli ayinakho iphango.
- ukulunywa izinambuzane ezinobuthi.
- I-anorexia omsakazo ezahlukene (sezinzwa, idiopathic).
- Ezimweni i ukukhathala umzimba ngemuva kokuxinwa izifo.
- In the ukwelashwa kuhlangene - ukwelapha pancreatitis okungamahlalakhona (isifo amanyikwe).
Izidakamizwa "peritol" yokusetshenziswa okufanele ngempela kube iphakethe, iqukethe izingxenye ezilandelayo:
- main izidakamizwa esebenzayo - hydrochloride cyproheptadine (4 mg).
- izingxenye engeziwe imithi - amazambane isitashi, magnesium stearate, talc, monohydrate lactose, talc, gelatin.
"Peritol" imithi uyadayiswa yini uhlobo:
Amaphilisi Agcwele ebhokisini amakhadibhodi yizicucu 20. ithebhulethi ngamunye - 4 mg.
Isiraphu is zahlanganiswa ku izitsha eziyisikhombisa umbala emnyama 100 ml.
Indlela isicelo futhi umthamo amaphilisi
Amaphilisi ezithathwe umlomo, okungcono kusihlwa ngemva kokudla kwakusihlwa.
Umthamo amaphilisi "peritol" kabani intengo akuyona ezishibhile, kuye ngokuthi uphethwe lesiguli, kanye yobudala bakhe. +
- evamile I umthamo wansuku zonke izingane iminyaka engu-15 ubudala futhi abadala - 1 ithebhulethi kathathu ngosuku (ingqikithi 12 mg zomuthi etholwe).
- Uma kukhona isifuba ezingamahlalakhona - 0.5 amaphilisi izikhathi 3 ngelanga (okuyi 6 mg izidakamizwa).
- Uma umuntu omdala i migraine acute ke kufanele kuthathe 1 iphilisi esisodwa. Lapho yimuphi umphumela asikafiki, udinga isigamu sehora ukuphinda yokwamukela umthamo ofanayo. Lonke inani izidakamizwa okungaba isiphuzo noma iduna noma insikazi amahora 6 kumele singeqi 2 amaphilisi.
- Uma intombazane okwatholakala "sokuzincisha" ke kubalulekile ukuba baphuze 1 ithebhulethi izikhathi 3 ngosuku.
Ubani okumise isiraphu "peritol"?
Tablets obubhekiswe akuzona osebenzayo, kutuswa ukusebenzisa izidakamizwa kolunye uhlobo ukukhululwa ngabo.
Umthamo nomuthi ewuketshezi yilesi:
- Babe kusukela eminyakeni emi-2 kuya ku-7 ubudala - 10.5 ml isiraphu 1 isikhathi ngosuku.
- amantombazane nabafana 7 kuya kwengu-14 - 10 ml isiraphu izikhathi 2-3 ngosuku.
"Peritol" - isiraphu noma amaphilisi kwezokuphatha ngomlomo - kumele kusetshenziswe ngokucophelela ukuze izingane nasebekhulile. Iqiniso lokuthi lezi zigaba zabantu ichayeke ngokukhethekile imiphumela emibi lesi izidakamizwa.
Udinga kube ukuhlakanipha kubantu abane isifo senhliziyo, noma abanomlando yesifuba somoya bronchial, i-hyperthyroidism noma umfutho wegazi ophakeme.
Phakathi ukwelashwa, imithi "peritol" imfundo manual echaza izimo lapho izidakamizwa okufanele zithathwe ngokucophelela, kungcono ukugwema imisebenzi eyingozi, kanye nokushayela imoto.
Overdose ezinganeni nakubantu abadala
Uma umuntu ngephutha noma ngamabomu baphuza imithi, khona-ke kungenzeka maduze inkinga yezempilo. Ngakho, ngo-izingane izimpawu of ukweqisa izidakamizwa waphawula lokhu okulandelayo: injabulo, okuvela kuyo ukuhhema, ukuquleka, ukuqina balezi zingane, izinkinga nemithambo yegazi, futhi ngisho ikhoma.
Kubantu abadala, izinkinga ezingase zivele singenzeka ezifana: ukudideka, ukucindezeleka, ukuquleka, ikhoma. Kakhulu akuvamile babe ngamanzi isikhumba , futhi pyrexia ngenxa yokwamukela engalawuliwe kusho "peritol". ekusetshenzisweni lo mhlahlandlela imithi uchaza ukuthi yini okufanele athathe eduze ukuze basize owayelimele.
Ngakho, umuntu kufanele kuqala ugeza esiswini, bese baphuze namalahle isebenze. With ukuthuthukiswa atropine imiphumela (ngokucasuka isimiso sezinzwa) udinga usizo uchwepheshe. Udokotela isebenzisa Kulokhu , parenteral ekuphathweni isixazululo physostigmine salicylate. Isazi, esekelwe isimo futhi ngezimo zesiguli ingase futhi ubambe yokusiza umuntu ukuba aphefumule. Kodwa izinto ezisigcina analeptic futhi kulokhu, ingabe contraindicated.
Medicine "peritol" ngoba isisindo somzimba, kanye ukwelapha komzimba ka etiologies ehlukahlukene, futhi eziningi nezinye izifo, kungabangela ukusabela ezingezinhle kubantu kusukela izinhlelo ezahlukene umzimba:
- ipheshana kwesisu: isicanucanu, ukuhlanza, uhudo, nomlomo owomile.
- Kusukela inhliziyo, imithambo yegazi kanye igazi: hemostasis, hematopoietic neziyaluyalu, tachycardia, anaemia hemolytic.
- Umzimba ongezwani nezinto ukusabela: ukuqubuka, angioedema, anaphylaxis, photosensitivity.
- Kusukela isimiso sezinzwa futhi izitho sezinzwa: ikhanda elibuhlungu, isiyezi, ukukhathazeka ngamaphupho nje la.
Nomuthi "peritol" yokusetshenziswa othi izidakamizwa kumele kusetshenziswe ngokuqinile ngokuvumelana ubufakazi udokotela, ayikwazi zaphathwa abantu ngaphansi kwalezi zimo ezilandelayo:
- Ngesikhathi ekhulelwe futhi ngesikhathi ibele.
- In engela-Ukuvalwa glaucoma.
- Uma isiguli BPH futhi urinary nokugcinwa uyalandelwa.
- Uma isiguli beyizidlova ukuthuthukiswa edema.
- Umuthi ungaphakathi ifomu iphilisi asivunyelwe ukuthatha izingane ezingaphansi kweminyaka engu-2.
Izindleko imithi "peritol" incike esebenzisa Ukukhishwa, inani amaphilisi e iphasela noma ngevolumu isiraphu. Ngakho, amaphilisi "peritol", intengo zazo emadolobheni ahlukene of Russia kanye abatshuzi, angathengwa ruble 500 kuya ku-800 iphakethe ngasinye (iphakethe amaphilisi 20). Umqulu isiraphu 100 ml zingathengwa ngentengo ruble 1200-1500.
imicabango yabantu zabantu
Izidakamizwa "peritol" has a ukubuyekezwa ambalwa lokhu ngesizathu sokuthi bathi akayena ethandwa futhi ikhangiswe. Kwakunzima ngisho ukuthola Pharmacy, ngakho abantu abathenge imithi kuya ku-intanethi. izahlulelo zabo ngomuthi ingxenye enkulu kwesokunxele kuya besifazane abaye basebenzisa izindlela ukuze isisindo sakhe sithi ukuthuthuka. I ubulili fair, okwadingeka asebenzelane ngezibuyekezo lesi sidakamizwa "peritol 'ka ishiywe omuhle kuphela. Kodwa abanye abantu, bathi belulekwa: uma umuntu efuna ngcono ke, ngaphezu izidakamizwa, kubalulekile ukusebenzisa okunama-kilojoule amaningi kanye ukudla kalula digestible.
Kukhona futhi iziguli izimpendulo iphathwa nale izidakamizwa kusukela urticaria, dermatitis nezinye komzimba. Ngeshwa, esikhathini sethu, abantu abaningi engezwani Lokudabuka ezahlukene. Futhi akusiyo kucaca kulokho lokhu noma lowo muntu has a hypersensitivity kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni. Ngakho-ke, dermatologists baye ebekiwe imithi ehlukene lezi iziguli ukuze abone umuthi onamandla kakhulu ibiyakuphiliswa komzimba unaphakade. Phakathi kwemithi enjalo nemithi efakwe ohlwini "peritol". Amaphilisi ukusiza ngempela ukuba sibhekane ngokuphumelelayo nanoma komzimba zasezindaweni ezihlukahlukene, in iziguli izitobhi ukulunywa, ububomvu, umuntu uyayeka thimula nokukhwehlela.
Leli thuluzi ngempumelelo ngempela, kungase ukwelapha umuntu yilezo zifo, okuyinto ezibekwe imiyalelo. Nokho, ngokushesha bagijimela imithi ekhemisi noma oda nge-inthanethi ngeke kukusize ngalutho kuso. Phela, eyodwa kufanele kuqala bonana nodokotela wakho mayelana nokusetshenziswa kungenzeka lokhu imithi. Futhi uma onguchwepheshe imnike, umuntu uyoba umsebenzi owengeziwe omkhulu ukuze uyithole e-pharmacy.
Medicine "peritol": nozakwabo
Uma ungenalo ukuthole Pharmacy, ngesaba uyithenga kuyi-Internet, ungakwazi ukuthola izidakamizwa ezifanayo Effects. Ngakho, lesi sidakamizwa "peritol", analogue of okuyinto ngenhlanhla angathengwa ngaphandle kwezinkinga, ungakwazi shintsha imithi ezilandelayo: iphilisi "Gistafen", "Diazolin" "Claritin", "Loratadine", "Aerius", "Dramina".
Imibandela kanye nemigomo
Igcina imithi kuyadingeka ngesikhathi lokushisa kusuka 15 kuya 25. Lo muthi, njengoba ngempela futhi neminye imithi, kumele agcinwe kude nezingane ukuze abazange bamthole futhi engaqondile angaphuzi isiraphu noma ukugwinya amaphilisi. Impilo eshalofini izibhebhe lokhu umuthi iminyaka 5, futhi isiraphu - iminyaka engu-3.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi konke mayelana "peritol" ukulungiselela. Imiyalelo, intengo, uhlobo lwezinkinga, ukubuyekezwa zabantu ngaye ziye zadingidwa ngokuningiliziwe isibuyekezo. Sithole ukuthi kusho ezimbi kusisiza ukuqoqa isisindo ulahlekile. Futhi, lolu izidakamizwa ikufakazele aphumelele ekucwileni ezikweletini izimpawu komzimba zasezindaweni ezihlukahlukene. Nokho, ngeshwa, ukuthenga leli thuluzi, kudingeka basebenze kanzima ngoba akuyona njalo engenzeka ukuthola Pharmacy. Kodwa noma ngabe kunjalo, uma udokotela isiqoke amaphilisi umuntu noma isiraphu "peritol" kubalulekile ukuthola kwabo. Eqinisweni, nahlulele by izibuyekezo zabantu, lokhu izidakamizwa iphumelela ngempela.
Umuthi 'Canison "(wamafutha). imfundo
Medicine "Wicks fa." imfundo
"Reslip": ukubuyekezwa kanye analogue
Isiraphu ye licorice futhi "Enterosgel" - ekuhlanzeni uhlelo lymph (ukubuyekezwa)
Drops kusukela umkhuhlane "Pinosol" - izingane hhayi kuphela
Izingane Efferalgan - Umsizi abandayo
Odokotela ngesikhathi 1941-1945 Omkhulu Patriotic kwesikhathi War. yezokwelapha feat e ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe
Reichstag - iPhalamende isiJalimane, futhi kuba inkumbulo yethu
Iminyango endlini: ukhethe izinto kakhulu emvelweni
Zokulinganisa - a ... nokuhlela ukuphathwa Kwezabasebenzi
Yiziphi amafutha, amafutha trans futhi inama?
Njengoba e "Skyrim" avule umnyango a uzipho legolide? Amavesi imfihlo
Amajuba iphepha ngezandla zakho: omkhulu isipho esihle razlechenie
Amaholo ku-intanethi ku-ukukhangisa ngaphandle imali: incazelo, impendulo. Amaholo on the Internet for yokubuka izikhangiso